प्रतीक 2017 एक रोस्टर कुखुरा छ। यस लेखमा हामी कसरी नरम शुभंकर केही विकल्पहरू बनाउन कुरा हुनेछ। त्यहाँ विकल्पहरू जहाँ आवश्यक ढाँचा खिलौने छन्। कुखुराको भाले आफैलाई चित्रकला बनाउन सम्भव पनि छ। मा शङ्का छैन जो गर्छन् आफ्नो कलात्मक क्षमता ती, को कपडे यति सीधा गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो हातमा लाग्यो को कुखुराको भाले (नमुना आवश्यक छैन)
2017 मा निर्माण को लागि, वर्ण आवश्यक हुनेछ:
पातलो ट्रंक (वैकल्पिक) गर्न लाइटर छाया लाग्यो।
सात विभिन्न रंग को कठोर batt रहनेछ।
रातो कठिन महसुस गरे।
पातलो पहेंलो एउटा सानो टुक्रा लाग्यो।
यार्न उपयुक्त रंग।
मोती वा तयार पुतली आँखा।
ढाँचाहरू लागि गत्ता।
चक वा शेष।
सिलिकन गोंद बन्दूक।
यो उत्पादन को लागि, हामी एक ढाँचा आवश्यक छैन। कुखुराको भाले हामी 12 हृदय देखि बनाउन। तिनीहरूले हात झिक्नु गर्न सकिन्छ। यो कुखुराको भाले एउटा बच्चा एउटा उपहार रूपमा खेलौना क्रिसमस ट्री मा हङ गर्न सकिन्छ, वा फेब्रुअरी 14 मा एक प्रेम गर्नुभयो।
कागज2ठूलो हृदय मा आकर्षित, आकार तपाईं सी चाहनुहुन्छ ठूलो चरा कसरी निर्भर गर्दछ। यो एक सानो कुखुरा-मायालाई वा विशाल, को तकिया रूपमा हुन सक्छ।
हामी कागज दुई शरीर भन्दा हृदयको आधा भन्दा कम आकार मा आकर्षित। थप पुच्छर कुखुराको भाले अर्को5तत्व र रिज दुई साना चित्रण। अर्को दुई कलिलो मन चुच्चो र आँकडी लागि आवश्यक छ। एक अलि बढी र दोस्रो - कम। कुखुराको भाले नमूना तयार छ। कागज को तत्व कटौती र कपडा तिनीहरूलाई विघटित। हामी एक सुविधा पिन ठीक। अब तपाईं महसुस बनेको हृदय कटौती गर्न सक्छन्।
तपाईं पनि एक पूर्वानिर्धारितएकाईहरू रूपमा ढाँचा बस प्रयोग गर्नुहुन्छ र तिनीहरू वरिपरि कटौती गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझ राम्रो चक गर्छन्। तपाईं एक पेन्सिल वा कलम पहिल्याउन भने, यो कट मा भद्दा चिन्ह रहनेछ। किन धेरै needlewoman को महसुस गर्न ढाँचा पिन र billets कटौती गर्न रुचि छ। के तल छलफल रूप मा, workpiece कटौती राम्रो छ बारे।
त्यसैले तपाईं भविष्यमा खिलौने को तत्व बाहिर कटौती। अब तपाईं कुखुरा आँखा रूपरेखा गर्न आवश्यक छ। ती दुबै पक्ष छन्। एउटा सानो वस्तुमा तपाईं प्रविधी प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई embroider सक्नुहुन्छ फ्रान्सेली गाँठ वा सिलना मनका। ठूलो cockerels लागि खेलौनाहरू लागि विशेष गोंद आँखा खरिद वा बटन सी गर्न सकिन्छ।
हामी पखेटा बारी। गोंद वा तिनीहरूलाई सी गर्न: त्यहाँ दुई विकल्प छन्। खाली लिन, आधा मा गुना र तपाईं को लागि सुविधाजनक शरीर को बीचमा यो संलग्न गर्नुहोस्।
अर्को, हामी हाम्रो कुखुराको भाले पुच्छर फैशनेबल गर्नेछ। यो गर्न,7prefab तत्व लिन। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य संग बांड गर्न आवश्यक छ। तपाईं एक सुई र मुद्दा वा गोंद संग गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो हृदय र तय को केन्द्र मा superimposed।
हामी कुखुरा को विधानसभा गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। शरीर को दुई आधा लिन र किनारा सी एक पाश सिउनी। पहिलो, गाँठ लुकाउनुहोस्। त्यहाँ एक पुच्छर हुनुपर्छ ठाउँमा गर्न सिलना। टाँस्नुहोस् र सँगै सिलना। कुखुरा hollofaybera वा कृत्रिम गद्दी भर्नुहोस्। यसलाई अन्यथा यो त्यहाँ चर्किएको थिए महसुस कि जस्तो हुनेछ, एक सानो हुनुपर्छ।
आधा एक सानो हृदय राख्नु र कुखुरा मा साँघुरो पक्ष सम्मिलित। यो दाढी। केही टाँका बनाउन र यो हृदय को सानो बनाउने, को चुच्चो संलग्न गर्नुहोस्। यो तेज पक्ष को दुई आधा बीच सम्मिलित हुनुपर्छ। एक कोर्नु त्यहाँ र दुई हृदय सम्मिलित गर्नुपर्छ ठाउँमा स्क्रोल गर्नुहोस्। तपाईं क्रिसमस ट्री लागि खेलौना बनाउन भने लुपमा टेप को शीर्ष घुसाउनुहोस्।
तपाईं महसुस कटौती
महसुस खिलौने को निर्माण द्वारा आकर्षित थिए भने केही तीव्र कपडा कैंची प्राप्त। तपाईं अन्य उद्देश्यका लागि सामाग्री साधन कटौती गर्न सक्दैन। महसुस विभिन्न प्रकारका लागि व्यक्तिगत कैंची खरिद गर्न सल्लाह सजिला अनुभव। सिद्ध किनारा प्राप्त गर्न, ऊन सामाग्री पलिएस्टर कपडे लागि कैंची संग कटौती छैन। तिनीहरूले यो tupyatsya छन्।
एक कुखुराको भाले कसरी सी गर्न। ढाँचा परी चरा
यो मास्टर वर्ग Pushkin गरेको दन्तिये को ढाँचा कुखुराको भाले दिइनेछ। यो खेलौना छोराछोरी रमाइलो गर्न निश्चित छ। "सुनको Cockerel" शरीर भागहरु, टाउको, पखेटा, तीर हुन्छन्। खिलौना महसुस सामाग्री वा कुनै पनि variegated बाहिर गर्न सकिन्छ। Vykroyte भागहरु र तिनीहरूलाई भित्री सिउनी सी। यस कुखुरा कृत्रिम गद्दी, hollofaybera वा ऊन हुन सक्छ भर्नुहोस्। टिप: जब उछाल जारी एक बुनाई सुई, एक पेन्सिल वा चपस्टिक प्रयोग गर्न सुविधाजनक छ।
शुभकामना र समृद्धि लागि कुखुरा
सबैभन्दा सरल ढाँचा खिलौने त्यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ। कुखुराको भाले हामी बाक्लो प्राकृतिक कपडे देखि सी। फिट सनी वा कपास। 30 सेमी द्वारा नाप्ने 15 आयत कटौती। भित्री आधा अनुहार मा गुना। को बोरा प्राप्त गर्न दुवै पक्ष सी। तपाईं मिसिन मा एक लाइन बनाउन वा "फिर्ता सुई" सिलाई सी गर्न सक्नुहुन्छ।
बल्क खेलौना कुखुरा प्राप्त गर्न एउटा सानो चाल प्रयोग गरेर। हामीले निर्माण छैन तत्व को एक ठूलो संख्या को आफ्नो हात ढाँचा। यो अन्त गर्न, माथि सिउनी फरक दिशामा पतला गर्नुपर्छ। कटाई kefir को त्रिकोणात्मक प्याकेज सदृश गर्नुपर्छ।
पछिल्लो भाग, हामी सी र velcro बनाउन छैन। हामी खिलौने धेरै उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ: बच्चा मनोरन्जन गर्नु, वा जन्तरको रूपमा घर राख्न। यसको कार्य प्रभावित हुने को, हामी भर्न हुनेछ। अस्तर, padding पलिएस्टर वा hollofayber: यो एक नरम फिलर छ। तल छलफल भर्नु को दोस्रो embodiment बारेमा।
निःशुल्क खिलौने को पक्ष गुना, को Velcro लो र यो उत्पादन को भित्री किनारा मा गोंद। अब हामी एक कुखुराको भाले कोर्नु र दाढी आकर्षित गर्न आवश्यक छ। तपाईं रातो वा सुन्तला कठिन महसुस टुक्रा सिधै गर्न सक्नुहुन्छ। चक संग कपडे मा आओ, यसलाई ढाँचा हुनेछ। कुखुराको भाले फैशनेबल दाढी र शिखा बिना द्वारा उहाँले महिलाहरुको को ध्यान आकर्षित गर्ने, कल्पना गर्न गाह्रो छ।
माथिल्लो सिउनी बीच पिगलो गोंद मार्फत COMB। दाढी अनुहार लीन। तयार कुखुरा।
भरण कुखुरा, राम्रो तरिकाले-जा ल्याउन
तपाईं जन्तरको रूपमा घर प्ले गरिएको चरा चाहनुहुन्छ भने, यो सही भरिएको हुनुपर्छ। तपाईं परिवार मा आफ्नो वित्तीय स्थिति सुधार गर्न चाहनुहुन्छ? एक cockerel राख्नु सात सिक्का, बरु ठूलो रूपमा एउटा वास्तविक बिल।
पति र पत्नी बीच असामंजस्य भने, झोला मा तपाईं लैवेंडर थप्न चाहनुहुन्छ। तपाईंले सबै परिवारका सदस्यहरूले स्वस्थ थिए चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि एउटा झोला मा, राख्न लसुन दुई लौंग र पहाड खरानी पाँच सुकेको जामुन। पनि स्वास्थ्य chamomile र स्टेटजोन्स wort छन्। परिवारमा Recharge चाहनेहरूलाई, कद्दू बीउ मदत।
यदि राति सुत्न र खराब सपना हेर्न भयभीत भएका घरमा बच्चाहरु छन्, त्यसपछि एक cockerel मा tarragon पाँच sprigs राखे। हाम्रा पुर्खाहरूले यो दुष्ट शक्तिहरूको देखि घर सुरक्षा विश्वास गरे।
के कुखुरा गर्छ
र अन्तमा, का वर्ष को अन्त मा एक खेलौना संग के कुरा गरौं। यो आवश्यक छैन उत्पादन को निपटान छ। घर अगाडि हलवे मा बस्नुहोस्। यो चरा को स्लाव भाषाहरु मानिसहरूका बीचमा अशुद्ध सेना देखि सुरक्षा प्रतीक हो। कुनै आश्चर्य तिनीहरूले हिंड्न भन्छन् कि "पहिलो लंड अघि।" बेडरूम मा फेंग शुई अनुसार यो प्रतीक व्यभिचार विरुद्ध सुरक्षा।
प्रेम र राम्रो मुडमा खिलौने सी। त्यसपछि सबै talismans र amulets प्रभावकारी हुनेछ र तपाईंको घरमा भाग्य र समृद्धि ल्याउनेछ।
परम्परागत जापानी कला: ओरिगेमी त्रिकोणात्मक मोड्युलहरू
मोती को बन्डलहरूको - एक कृति लागि आधार
कसरी छिटो र सजिलै अन्तरिक्ष यान देखि कागज बनाउन
कपडे, sundresses: छनौट र आफ्नो उत्पादन
बिजुली गर्मी बन्दूक: समीक्षा र क्षेत्रीय
घर राम्ररी र प्रभावकारी अनुहार को सफाई गर्न रूपमा
को ओठ मा सर्दी को शीघ्र उपचार।
Phrenology - यो के हो? त्यो phrenology को विज्ञान जाँच्ने?
Submandibular lymphadenitis अन्य रोगहरु सँग संयोजनमा उपचार गर्नुपर्छ
'Eubikor' हो। समीक्षा, वर्णन, सङ्केत गर्छ
दबाइ 'Lozap' - प्रयोगको लागि निर्देशन
"Tanais" - संग्रहालय। पुरातात्त्विक संग्रहालय, रोस्तोव क्षेत्र: तस्बिर र समीक्षा